အဆက်အသွယ်တွင် Buzzwordsmithiness အားရှင်းလင်းမှုသည်တိုက်ခိုက် Martech Zone
နှစ်ပေါင်းများစွာငါ့မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ပါ စတိဗ် Woodruff, တစ် ဦး Self- ကွှေးကျွောခဲ့ (နှင့်အလွန်ပါရမီ) ရှင်းလင်းပြတ်သားအတိုင်ပင်ခံ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပရိုဖိုင်းများအကြား၊ သူကသူ All- အချိန်အကြိုက်ဆုံး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကငါနဲ့အတူ
ရှုပ်ထွေးသောလိုက်လျောညီထွေရှိသည့်စနစ်၏အခြေခံမူများအပေါ် အခြေခံ၍ ရေရှည်တည်တံ့။ စားသုံးသူ - မောင်းနှင်သည့်တိုးတက်မှုအတွက်ပုံစံသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုကြုံတွေ့နေရသောကမ္ဘာအတွက်မဟာဗျူဟာအတွက်အသစ်သောအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးကိုဖန်တီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောယူဆချက်များ၊ စျေးကွက်နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများ၊ ရှုမြင်ရန်နှင့်စဉ်းစားရန်မတူညီသောရည်ညွှန်းမှုဘောင်။ ဂေဟစနစ်များသည်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏အခြေခံသစ်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းများအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမည်သို့နေရာချထား။ စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုသိသောကုမ္ပဏီများသည်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုများကိုတွန်းအားဖြစ်စေနိုင်သည်။
ငါဒီ post ကိုခဏလောက်ရေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာ၊ Mark Schaefer, ထိုဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မာကု shared ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Palmolive byline၊ အဆက်အသွယ်အပေါ်အမဲဆီ Attacks.
ဒါကြောင့်ဒီ post ရဲ့နာမည်ပါ။ မာ့ခ်ကိုသူ့ Facebook post ကနေခိုးယူတာကိုစိတ်ထဲမထားပါဘူး။ အိုး၊ မာ့ခ်၏ဒိုမိန်းသည်လျောက်ပတ်စွာသတိပြုသင့်သည် Businessgrow.com... ကထက်မဆိုရှင်းလင်းရသနည်း
စတိဗ်ရဲ့လူမှုရေးခွဲဝေမှုဟာကျွန်တော့်ကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင်စွဲလန်းစေခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော bullshitter ကိုတုန်လှုပ်စေသောအသုံးအများဆုံးစကားစုစကားစုများဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှစာသားမဲ့သောစကားစုကိုစတိဗ်ဝေမျှတိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးသူမရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ဘရောင်ဇာကိုဖွင့်ခဲ့သည် DK New Media!
ရလဒ်အနေနဲ့ငါလှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည် ပုံသေတပ်ထား မူလစာမျက်နှာ။ ငါဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေဟာငါတို့ရဲ့အေဂျင်စီကိုဆက်ပြီးအသုံးပြုနေကြတာလဲ။ အရာအားလုံးတစ်ခုတည်းကိုကျဆင်းသွားတယ်။ သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းစျေးကွက်နှင့်အတူကျိုးပဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ပြင်နေတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏မိတ္တူများ၊ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ဝါကျတွင်စကားလုံးတစ်လုံးသာအစားထိုးလိုက်သောကောင်းမွန်သည့်ဇာတ်ညွှန်းငယ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရေးခဲ့သည်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတင်ဆက်သည့် verbiage အသစ်သည် -
ကျနော်တို့ထိုးသွင်းသောဝေါဟာရများဖြစ်ကြသည် ရလဒ်၊ ဂုဏ်သတင်း၊ ရာထူး၊ itors ည့်သည်များ၊ အာဏာပိုင်၊ ဦး ဆောင်သူ၊ နောက်လိုက်များ၊ ဝင်ငွေခွန်၊ ဒေါင်းလုပ်များ၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ အသိအမြင်, နှင့် တောင်းဆိုချက်.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဖောက်သည်တွေရဲ့စျေးကွက်ရင့်ကျက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်ကဘာလဲ။ ဆိုလို? ကောင်းပြီ၊ ဆိုလိုတာကအမှားတွေကိုငါတို့ပြင်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတိုင်း၌၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအာရုံစိုက်စေလိုသည့်အရာဖြစ်သည်။ ငါတို့ကသူတို့စျေးကွက်မဟာဗျူဟာတွင်ရှိသည့်ကွာဟချက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီး ၄ င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုရှေ့သို့တိုးရန်ထိုကွာဟချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကူညီပေးချင်သည်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဖော်ပြချက်ရဖို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာစကားလုံးများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစေရန်ကူညီနိုင်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါဖြတ်သန်းသွားသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သည်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအာရုံစိုက်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအတွက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်ဟုယုံကြည်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနည်းပညာကုမ္ပဏီများအကြောင်းကျွန်ုပ်အမြဲရေးသားခဲ့သည် အကျိုးကျေးဇူးများကျော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး features တွေ.
Tags: အာဏာအသိအမြင်ရှင်းလင်းခြင်းဘာသာပြောင်းcopywritingတောင်းဆိုချက်downloads,စေ့စပ်ထားခြင်းပရိတ်သတ်တွေနောက်လိုက်ဆောင်Mark Schaeferစွမ်းဆောင်ရည်အမြတ်အစွန်းအလားအလာအဆင့်စာဖတ်သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းဂုဏ်သရေရလဒ်များလက်ရှိထားခြင်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာနရွယ်အရောင်းစွမ်းအားဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းSteve Woodruffစကားပြောအသုံးပြုမှုကြည့်ရှုသူများဧည့်သည်များ
ဒီဇင်ဘာ 22, 2016 မှာ 11: 52 AM
မင်းရဲ့ပင်မစာမျက်နှာမှာခင်ဗျားလုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးတဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့စကားလုံးများ၏“ carousel” ။ Bravo!
Jeffry Pilcher | ဘဏ္Brandာရေးအမှတ်တံဆိပ်
ဒီဇင်ဘာ 26, 2016 မှာ 11: 07 AM
စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ / အိမ်ထောင်စုကဏ္ in ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေသူများကသင်ရောင်းချနေသည့်အရာသည်လူတို့၏ပြsolveနာများကိုဖြေရှင်းရမည်ဟုနားလည်သည်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ပြproblemနာကိုသတ်မှတ်ပြီးအဖြေတစ်ခုကိုထိရောက်စွာပေးရမည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရ B5B စျေးကွက်သမားများက၎င်းကိုနားမလည်ကြပါ။ နှင့်များစွာသောကိစ္စများတွင်အများဆုံးရှုပ်ထွေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျကိုသူတို့အား peddling စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြေရှင်းချက်ကနေလာပါတယ်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများမှစီအီးအိုများနှင့်ကော်ပီရေးသူများသည်သူတို့၏အလုပ်များကို ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာပြုလုပ်သောကြောင့်အလွန်ကြီးကျယ်သောဝေါဟာရများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အများစုမှာရည်ရွယ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတဲ့အတွက်ရဲရင့်တဲ့ကတိတွေပေးဖို့မယုံကြည်ကြဘူး - ဥပမာ -“ မင်းတို့ပြproblemနာကို X ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ”
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကို၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်မိသားစုအတွက်ဘာလုပ်မည်ကို - ဝါကျတစ်ကြောင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် - မပြောနိုင်ပါကသင်သည်လုပ်စရာများစွာကျန်ရှိနေသည်။